दशैँ बिदामा कुन पुस्तक पढ्ने ? यी पुस्तक जसले तपाईँलाई सुँक्क सुँक्करुवाउँछ अनि पेट मिचिमिची हँसाउँछ « Lokpath
दशैँ बिदामा कुन पुस्तक पढ्ने ? यी पुस्तक जसले तपाईँलाई सुँक्क सुँक्करुवाउँछ अनि पेट मिचिमिची हँसाउँछ
काठमाडौं । ‘पढ्नु भनेको कुराकानी गर्नुजस्तै हो । सबै पुस्तकहरूले कुरा गर्छन् तर उत्कृष्ट पुस्तकले सुन्छ पनि ।’
यो भनाइ मार्क ह्याडनको हो ।
कि पढेर जानिन्छ कि परेर भन्ने नेपाली उखानै छ । तर परेर जान्दा धेरै कुरा बिग्रिसकेको हुन्छ । पुस्तक असल मित्र, सुख र दुःखको साथी हो । जीवन र समाजलाई बुझ्न होस् या बदलिँदो आर्थिक सामाजिक व्यवस्थालाई नियाल्न पुस्तकले मदत पु-याउँछ । त्यसैले पुस्तक ज्ञानको भण्डार । जीवन जिउने आधारदेखि जीवन जिउन सिकाउने प्रेरक पनि हो ।
चर्चित ‘कर्नाली ब्लुज’ र ‘फिरफिरे’ उपन्यासका लेखक बुद्धि सागर सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्छन्,‘किताब यस्तो होस्, पढ्ने मान्छेलाई लागोस्, एउटा छोटो समयको साथी, सबैभन्दा लामो र मीठो सम्झना दिएर गयो ।’
यसअर्थ पनि निरन्तरजसो पढ्ने लत लागेकाहरूले भन्ने गरेका छन् कि मेरो सबैभन्दा असल साथी मेरो पुस्तक हो । पाठ्यक्रमका मात्र नभई पत्रपत्रिका, तथा विभिन्न साहित्यिक तथा विज्ञान, दर्शन आदि किताब पढ्नाले विचारको उत्पत्ति हुन्छ, सृजनात्मक क्षमता बढ्छ र संसारलाई हेर्ने दृष्टिकोण समेत बदलिन सक्छ । त्यसैले यो पढाइ, सिकाइ तथा सृजनाको माध्यम हो ।
तर पछिल्लो समयमा केटाकेटी, युवा र वृद्ध तीनै वर्गका पुस्ताहरूले मोबाइल, कम्प्युटर र इन्टरनेटका कारण पढ्ने बानी घटाउँदै लगिरहेका छन् ।
इन्टरनेटभित्रका राम्रा र उपयोगी सामग्रीहरू पढ्नुभन्दा पनि सामाजिक सञ्जालमा एकोहोरो भइरहने बानी बढ्दै गएको छ, पछिल्लो पुस्तामा प्रयोगकर्तामा। कतिपयलाई त यसैको लत पनि भइसक्यो । युट्युबमा निरर्थक भिडियो हेरेर समय र जीवन व्यर्थ खेर फाल्नेको संख्या लाखौँमा होइन करोडौँमा छन् । र यो बढिरहेको छ ।
अध्ययन, चिन्तन र ध्यान मानिसका लागि महत्वपूर्ण पक्ष हो । मानिसले निरन्तर पढ्नुपर्छ । जसले जति बढी अध्ययन गयो, ऊ त्यति नै माथि गएका उदाहरण हाम्रो समाजमा प्रशस्त छन् । तपाईंले जति पनि सम्पन्न मानिस देख्नुभएको छ, उनीहरू पढ्छन् । सफल मानिसको सफलताको रहस्य नै अध्ययन हो ।
विश्वप्रशिद्ध साहित्यकार थोरोले पनि भनेका छन्, ‘पुरानो कोट लगाऊ नयाँ पुस्तक किन ।’
यसको अर्थ च्यातिएको लुगा लगाएर हिँड भन्न खोजेको होइन तर आफूले कमाएको केही रकम पुस्तकको लागि छुट्याऊ वा नयाँ लुगा र पुस्तकमध्ये एक छान्नुपर्दा भन्न खोजेको हो।
हिन्दू नेपालीको महान् पर्व दशैँको माहोलले छपक्कै छोपेको छ । अरु बेला व्यस्थ दैनिकीले गर्दा गाउँ फर्किन नपाएका धेरै नेपाली गाउँ फकिने क्रम पनि जारी छ । तर यसपटक पनि पोहोरजस्तै कोरोना भाइरसको कारणमानिसहरूपहिलेजस्तो गाउँ फर्कन सकेका छैनन् । बरु जो जहाँ छन् त्यहीँ नै सुरक्षित रहनुपर्छ भनेर सरकारले गरेको अनुरोधलाई नागरिकले अबलम्बन गरेका छन् ।
जे होस् सबैभन्दा लामो छुट्टी हुने चाड दशैँमा अघिल्लो वर्षहरूमा जस्तो गफगाफ गर्ने, खेल्ने, घुमफिर गर्ने माहोल छैन । यसकारण कोरोना जोखिमबाट पनि सुरक्षित रहने र समयको पनि सदुपयोग गर्ने उपाय किन नअपनाउने त ।
लोकपथ डटकमले यहाँ विभिन्न किताबहरू राखेको छ, जुनबाट तपाईँले जीवनलाई थोरै भएपनि बुझ्न सक्नुहुन्छ ।
चिना हराएको मान्छे–हरिवंश आचार्य
‘चिना हराएको मान्छे’ नेपाली हाँस्यव्यंग्य कलाकार हरिवंश आचार्यको संस्मरणात्मक जीवनी हो । पुस्तक आचार्यको आत्मवृत्तान्तमा केन्द्रित भई बाल्यकाल, आफूलाई सफल कलाकार बनाउन भोगेका समस्या, मदनकृष्ण श्रेष्ठसँग भएको परिचय, विवाह, जीवनवृत्ति र अन्य विषयलाई समावेश गरिएको छ ।यस पुस्तकले जीवन आउने समस्यालाई सामना कसरी गर्ने यसले सिकाउँछ ।
सेतो धरती, करोडौँ कस्तूरी–अमर न्यौपाने
‘सेतो धरती’मदन पुरस्कार प्राप्त कृति हो । अमर न्यौपानेको २०६८ मा प्रकाशित सेतो धरती उपन्यास बाल्यकालमै विधवा भएर जीवनभर वैधव्य जीवन जिएकी नारी ताराको करुण कथामा आधारित छ । उपन्यासकी नायिका ताराको ७ वर्षको उमेरमा विवाह गरिदिइएको छ । उसले ९ वर्षको उमेरमै विधवाको जीवन सुरु गर्नुपरेको छ ।छोरी मान्छेको कठोर संघर्ष र प्रताडनाको विषयमा केन्द्रित छ, उपन्यास ।
‘करोडौँकस्तूरी’उपन्यासमा करोडौँ निमुखाहरू कस्तूरीले जस्तै बिना चिन्न नसकेर जीवनभर असफल भएको घोषणा गर्न विवश सन्दर्भ मिहिन ढंगले केलाइएको पुस्तक हो ।
कलाकार हरिवंश आचार्यलाई नायक बनाइएको यस पुस्तकमा वनको कस्तूरी, जो आफ्नै नाभीमा भएको बिनाको सुगन्ध पनि कहाँबाट आयो भन्ने थाहा नपाएर फूलबाट आयो कि पातबाट आयो, माटोबाट आयो कि पानीबाट आयो भनेर खोज्दै भौतारिइरहन्छ । कहाँबाट सुगन्ध आएको हो भन्ने थाहा नपाएरै कस्तूरी मर्छ ।
तर, मानिस त्यस्तो कस्तूरी हो, जसले आफ्नो जीवनको सुगन्ध थाहा पाउने क्षमता राख्दछ । क्षमता राख्दाराख्दै पनि करोडौँ कस्तूरी आफ्नो जीवनको सुगन्ध थाहा नपाएरै मरे । करोडौँ कस्तूरी, जो आफ्नो जीवनको सुगन्ध थाहा नपाएर बाँचिरहेछन् । यही परिवेशमा केन्द्रित छ, उपन्यास ।
जीवन काँडा कि फूल– झमक घिमिरे (मदन पुरस्कारप्राप्त)
‘जीवन काँडा कि फूल’ झमक घिमिरेद्वारा लिखित आत्मकथा हो । यो पुस्तकमा झमकले आफूले भोगेको पीडा र सङ्घर्षको गाथा व्यक्त गरेकी छिन् ।
अझ समाजमा अपाङ्गता भएकाहरूको स्थान, अपाङ्गता हुनुको पीडा कथित सपाङ्ग भनिने मानिसहरूले दिइने चरम यातनाको रापबाट निस्किएको ज्वाला हो जीवन काँडा कि फूल ।
मानिस भित्रको पीडाको छट्पटी ओकल्न नपाउँदा कस्तो हुन्छ एक चेतनशिल मानिले अर्को चेतनशिल मानिसलाई दबाइरहदा दबिएको व्यक्तिको भावनामा कति ठूलो चोट पर्छ भन्ने कुरा यसबाट सिक्न सकिन्छ ।
पल्पसा क्याफे–नारायण वाग्ले (मदन पुरस्कारप्राप्त)
‘पल्पसा क्याफे’ उपन्यास नारायण वाग्लेद्वारा लिखित नेपाली चर्चित उपन्यास हो ।
यस उपन्यासमा तत्कालिन नेपाली द्वन्द्व चित्रण गरिएका छ । माओवादी युद्धताकाका एक चित्रकार, दृष्य, प्रमुख पात्रका रूपमा रहेको यो उपन्यास पुरै उनको वरिपरि घुमेको छ ।
तत्कालीन माओवादी युद्ध, राजदरबार हत्याकाण्ड र त्यसले आम सर्वसाधारण जनतामा पारेको असर र विद्यमान सामाजिक अवस्थिती जस्ता समसामयिक बिषयहरू समावेश गरिएको छ ।
शिरीषको फूल– पारिजात (मदन पुरस्कारप्राप्त)
पारिजातको रचना हो ‘शिरीषको फूल’ । जसलाई नेपाली साहित्यको इतिहासमा कोसेढुंगा मानिन्छ । त्यसबेलाको पुरुषप्रधान नेपाली समाजमा सुकन्याको विद्रोही रूपलाई कलात्मक रूपमा यसमा उतारिएको छ । जीवनको महाशून्यलाई अनुभव गर्ने, निरर्थकता जीवनको असफलता, दुर्भाग्य र निस्सारतालाई स्वीकार गर्न शिरीषको फूलबाट सिक्न सकिन्छ ।
विनोद चौधरी– विनोद चौधरी
विनोद चौधरीद्वारा लिखित ‘विनोद चौधरी’ एक आत्मकथा हो । यस पुस्तकमा उनका जीवनका अनुभव र राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विषयवस्तु समेटिएका छन् ।
यस पुस्तकबाट साधारण व्यक्तिबाट एक सफल व्यक्ति कसरी बन्न सकिन्छ भन्ने कुराको प्रेरणा लिन सकिन्छ ।
आफ्नो कथा–विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला
‘आफ्नो कथा’ विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको आत्मकथा हो । कोइरालाले आफ्नो जीवनको भोगाइहरू, दुखहरू र संर्घषलाई उनले यस पुस्तकमा समावेस गरेका छन् ।
महको म– मदनकृष्ण श्रेष्ठ
वरिष्ठ हाँस्यव्यंग्य कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठको आत्मकथा हो, ‘महको म’। यस पुस्तकामा श्रेठको बाल्यकालदेखिका सम्पूर्ण अनुभूति समेटेका छन् । उनको जन्म, पढाइ, भोगाइ, जीवनका हरेक संर्घष, कलाकारिताको सुरुवाती दिन, उनको रोग, उनका सुभचिन्तकहरूले दिएका सन्देश यसका छ । यस पुस्तकले जीवनमा आउने सबै परिस्थितिमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सिकाउँछ ।
लेखककी स्वास्नी–प्रगति राई
‘लेखककी स्वास्नी’ उपन्यास प्रगति राईले लेखेकी हुन् । यस उपन्यासमा नेपाली आम महिलाको भोगाइहरू र एउटा सिङ्गो समाजको यथार्तता समेटिएको छ।
उपन्यासले उठाएको मुख्य मुद्दा भनेको संसारका मानिसहरूको दुःखको विरुद्ध कलम चलाउने लेखकले आफ्नै परिवारभित्रका छोरीहरूको अस्तित्वलाई बेवास्ता गरिरहेको ठूलो भुल देखाउनु हो । यीबाहेक, उपन्यासमा जीवन उपयोगी दर्शन, चिन्तन, कला, विम्ब, प्रतिक, भाषा, संस्कृति, प्रेम, धैर्यता, अभाव, बाध्यता, मनोविज्ञान, सामाजिक विभेदको दर्पणहरूलाई प्रस्तुत गरिएको छ ।
मेरा जीवनका पाना– गौरा प्रसाईं (साझा पुरस्कार)
एमाले नेतृ समेत रहेकी गौरा प्रसाईंले तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थाका बेला पार्टीमा भूमिगत हुँदाका क्षण, अपहरणमा परेर भारतको वेश्यालयमा बेचिनुपर्दाको अवस्था, जेल तथा प्रवास जीवनलगायत बेग्ला–बेग्लै शीर्षकमा आत्मपरक जीवन संस्मरण इमान्दारीपूर्वक पुस्तकमा उतारेकी छन् ।
कर्नाली ब्लुज बुद्धिसागरद्वारा लेखिएको उपन्यास हो । यस उपन्यासमा लेखकले पश्चिम नेपालको तराईको गाउँदेखि विकट जिल्ला कालिकोटको पहाडी परिवेश बनाइएको छ ।बाल्य र किशोरावस्थाका उट्पट्याङ, बठ्याइँसँगै जीवनभोगाइका क्रममा आइलागेका कयौँ घटनाक्रम बुद्धिसागरको लेखकीय खुबीका कारण हाँस्दाहाँस्दै हृदय पगाल्ने लेखनी बनेको छ ।
यसमा नेपाली समाजमा विद्यमान विकृतिसँगै माओवादीको १० वर्षे हिंसात्मक विद्रोहका असर, प्रभावलगायतका थुप्रै पाटोहरू खोतलिएको छ । विकासको प्रवेशले नयाँ बस्तीको निर्माण र विस्थापनलाई पनि देखाएको छ । पुरानो पुस्ताको अवसान र नयाँ पुस्तालाई आएका चुनौतीको पनि सङ्केत गरेको छ । उनको फिरफिरेको पनि स्वाद चाख्न सक्नुहुन्छ ।
विजय कुमारको जीवन अनुभवको पुस्तक ‘खुसी’मा पाठकले काँचको पर्दामा ठाँटिएर आउने विजयकुमारका पर्दापछाडिका जीवन भोगाइ, उनका आनीबानी र केही हदसम्म उनको जीवन दृष्टिकोण पढ्न सक्छन् ।
जीवन जिउने काइदा–जीवन कुमार प्रसाईँ
‘जीवन जिउने काइदा’ले सरल उपायहरूबाटै कसरी स्वस्थ्य र दीर्घायु बन्न सकिन्छ ? भनेर पाठकलाई जानकारी दिन्छ । तर, पुस्तकभर प्रसाईँले पाठकलाई औषधिपसल नलगेर हाम्रै वरपरका वस्तुमा भएका औषधिजन्य गुणहरूको पहिचान गराउँछन् । अनि तिनै गुणहरूको वर्णन रोचक तवरले मधुमेह, उच्च रक्तचाप र क्यान्सरजस्ता रोगसम्म जोडिन पुग्छ । परिवारको स्वास्थ्यप्रति सचेत गृहिणीदेखि यस विषयको अनुसन्धातासम्मका निम्ति यो पुस्तक उपयोगी छ ।
आमाको मुटु–रामेश कोइराला
अत्यन्त स्वभाविक भाषा र सुन्दर शैलीमा लेखिएको एक सशक्त संस्मरणात्मक कृति हो ‘आमाको मुटु’ । मूल सडकको छायाँमा परी कान्तिहीन हुँदै गएको भद्रपुर नगरी र अज्ञानी डाक्टरहरूको निर्मम प्रयोगशाला बन्न अभिशप्त एक आमाको मर्मान्तक कथा हो यो । लेखककी आमाको मुुटुको मात्र होइन, धेरै आमाको मुटुको मुटु छुने कथा पनि हो यो कृति ।
उनको परिवारको मात्र होइन, नेपाली समाजमा भइरहेका रूपान्तरणका आयामहरू, प्राप्ति र पीडाको जीवन्त अभिलेख हो आमाको मुटु ।
सिंहदरबार बदल्ने संघर्ष– लालबाबु पण्डित
सिंहदरबार बदल्ने संघर्षमा नेता लालबाबु पण्डितको जीवन समेटिएको छ ।
पहिलोपटक मन्त्री हुनेबित्तिकै जताततै विसंगति र विकृति देख्नथालेपछि परिवर्तनको पाइला आफैँबाट चाल्ने अठोट गरेका पण्डितले, त्यतिबेला गरेका कामहरूलाई पुस्तकमा राखेका छन् । यसमा केही बाल्यकालका सम्झना छन् । पञ्चायतकालको उनको राजनीतिक संघर्ष पनि छ । उनले पहिलो संविधानसभामा खेलेको भूमिका पनि छ । उनी मन्त्री हुँदा गरेका काम र भोगेका चुनौती छन् ।
फस्ट लभ– अजित बराल
पहिलो प्रेम हरेक मान्छेको जीवनभर अर्थ राखिरहने महत्वपूर्ण अवस्था हो । पहिलो प्रेम वियोगमा नटुंगिने पनि विरलै हुन्छ । तर पहिलो प्रेमको वियोग सधैँभरि मुटु खाइरहने हुँदैन । उमेर र बुद्धिको विकाससँगै मान्छेले जब आफ्नो पहिलो प्रेमको मुल्याकंन गर्छ तब त्यो एउटा मीठो सम्झना बन्दै जान्छ । यस्तै मीठा सम्झनाहरूलाई, पहिलो प्रेमका स्मृतिहरूलाई सस्मरणको गरिएको पुस्तक होे फस्ट लभ ।
काठमाडौँमा एक दिन–शिवानी सिंह थारू
मोडल, सञ्चारकर्मी शिवानी सिंह थारुको उपन्यास हो ‘काठमाडौंमा एक दिन’ । यो जनआन्दोलन २०६२÷६३ को समय र त्यतिबेलाको मधेसी परिवेशलाई समेटेर लेखिएको पुस्तक हो । शिवानीका यो साहित्यिक राजनीतिशास्त्र हो । एक दिनको कथामा लेखिएको यो पुस्तकको विशेषता पात्रमाथिको निरपेक्षता हो ।
तीन घुम्ती–विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला
विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाद्वारा लिखित ‘तीन घुम्ती’ उपन्यासमा नारीका तीन रूप प्रेमिका, पत्नी र आमाको चित्रण गरिएको छ ।
एउटी नारीको तीनवटा छुट्टाछट्टै निर्णय बाबुआमाको इच्छाविपरीत प्रेम विवाह, पतिको अनुपस्थितिमा परपुरुषसँग यौनतृप्ति र सन्तान प्राप्ति, पतिबाट अस्वीकृत भएपछि छोरी लिएर एक्लै बस्ने निर्णयमा आधारित उपन्यास हो । यी तीनवटै निर्णयमा आफ्नो अस्तित्व जोगाउन एउटी नारीले गरेको संघर्षको कथा हो तीन घुम्ती ।
प्रिय सुफी– सुबिन भट्टराई
लेखक सुविन भट्टराईको पाँचौँ कृति हो ‘प्रिय सुफी’। प्रेम, विछोड, घृणा, संर्घष, क्रोद, हार,सफलता, मित्रता, साहयताको समिश्रण हो, उपन्यास प्रिय सुफी । उनको समर लभ युवापुस्ताले निकै रुचाएको कृति हो ।
यसबाहेक यहाँ उल्लेख नगरिएका अति उत्कृष्ट किताबहरू पनि छन् । मदन पुरस्कार प्राप्त किताब खोजेर पढ्न सक्नुहुन्छ ।
यी पुस्तकहरू पनि पढ्न सक्नुहुन्छ
१) लभ इन द टाइम अफ कोलेरागार्बियल गार्सिया मार्खेज
२) द गुड अर्थ : पर्ल एस बक
३) स्नो : ओरहान पामुक
वर्णनात्मक लेखनीको उच्च नमूना । प्राय : कविलाई सोधिने सामान्य प्रश्न तपाईँको कविताको प्रेरणा के हो ? को गम्भीर उत्तर हो, सम्पूर्ण उपन्यास ।
४) द स्टोरी टेलर : मारियो भर्गास लोसा
५) द गे्रट ग्यास्बी : एफा स्कट फिजर
६) दी वल्र्ड म्यान एन्ड द सी : अर्नेस्ट हेमिङ्बे
७) लाइफ अफ् पाई : यान मार्टेल
८) द बुक थिफ : मार्कस जुसक
९) जर्नी अफ सक्सेस : डा. विसाल ज्ञवाली
जीवनमा कसरी सफल हुन्छ भन्ने विषय यसमा समेटिएको छ । जीवन जीउन, खुसी रहन र हिम्मत नहार्न यस पुस्तकले सिकाउँछ ।
प्रकाशित मिति: २०७८,आश्विन,२७,बुधबार १२:४३